Gcina Imibuzo kunye neempendulo | Plum emangalisayo
Ngaba luluhlobo luni lokhuseleko olusebenzisa uPlamu lweVenkile emangalisayo?
impendulo: Asigcini naluphi na ulwazi lwekhadi letyala kwindawo yethu. Zonke izinto ezenziwa zisingathwa ngokuthe ngqo phakathi kwebrawuza yakho kunye neeseva zeqonga lokuhlawula (umtya, i-PayPal, njl.njl.) I-Plum emangalisayo ayikaze ibone ulwazi lwakho okanye ilondoloze nangayiphi na indlela. Umboneleli wentlawulo emva koko usazisa kwaye sithumela iodolo yakho.
Indawo yethu yonke isebenzisa ii-https kwivenkile nakwiphepha ngalinye. Isiza sisebenzisa i-SSL (iZiseko zoKhuseleko eziKhuselekileyo) eyitekhnoloji yokhuseleko esemgangathweni yokuseka ikhonkco elibetheliweyo phakathi kweseva yewebhu kunye nesikhangeli sakho. Eli khonkco liqinisekisa ukuba yonke idatha edlulisiweyo phakathi kweseva yewebhu kunye neebrawuza zihlala ziyimfihlo kwaye zidibene. I-SSL ngumgangatho womzi mveliso kwaye isetyenziswa zizigidi zewebhusayithi ukukhusela intengiselwano yabo kwi-Intanethi kunye nabathengi babo.
Ukuze ukwazi ukwenza uqhagamshelo lwe-SSL umncedisi wewebhu ufuna iSatifikethi se-SSL. Ungasibona isitshixo kwibhar yedilesi ye-url apha ngasentla. Ukucofa kwindawo yokutshixa kubonisa isatifikethi esikhuselekileyo kwiwebhusayithi yePlum emangalisayo. Zonke iindlela zokuhlawula zidibanisa ngokukhuselekileyo nangokuthe ngqo kwiinkqubo zokuhlawula.
Zeziphi iindlela onokukhetha kuzo intlawulo onazo?
impendulo: I-Stripe, i-Amazon, i-PayPal kunye ne-AliPay. Ezi zixhasa iindlela ezininzi ezahlukeneyo zamakhadi etyala, kwaye zikhuseleke kakhulu. Ukuba ivenkile yePlum emangalisayo yongeza ezinye iindidi zokuhlawula, nceda usazise.
Impendulo: ngombala yeyona ndlela ilula yokwamkela iintlawulo kwi-Intanethi nakwiifowuni zokusebenza. Ikwaxhasa elona nani likhulu lamakhadi etyala kwihlabathi liphela. Njengoninzi lweeprosesa zokuhlawula, iStripe ifuna ulwazi lomntu siqu njengegama, idilesi, njl njl ukuqinisekisa ukusetyenziswa kwekhadi letyala kukhuseleko lwakho.
Xa uthenga uyisebenzisana ngqo ne-Stripes server kwibhrawuza yakho usebenzisa iindlela eziqinileyo ezifihlakeleyo zombini iindlela. IPlamu emangalisayo ayikaze ibone ukuthengiselana okanye ulwazi ngekhadi letyala.
IAmazon iyafumaneka kumazwe ambalwa.
Ukuba uzama ukuyisebenzisa kwaye emva koko ufumane inqwelo ayikuvumeli ukutshintshela kwezinye iindlela zokuhlawula njengeStripe, emva koko ungene kwiPlum Isiza esimangalisayo kwaye ungene kwakhona. Ngoku ungasebenzisa enye inkqubo yokuhlawula.
Ukuba unayo nayiphi na ingxaki sazise.
Yintoni iApple Pay? (ayifumaneki ngoku)
impendulo: I-Apple Pay kunye nendlela yokuyisebenzisa ichaziwe kule khonkco.
impendulo: I-PayPal yenye indlela yokwenza intlawulo kwi-Intanethi. Njengoninzi lweprosesa yokuhlawula iPayPal ifuna ulwazi lomntu othile njengegama, idilesi, njl.njl. Ukuqinisekisa ukusetyenziswa kwekhadi letyala kukhuseleko lwakho.
Xa uthenga uthenga udibana ngqo neseva yePaypals evela kwisiphequluli sakho usebenzisa ufihlo olunamandla zombini iindlela zombini. IPlamu emangalisayo ayikaze ibone ukuthengiselana okanye ulwazi ngekhadi letyala.
Awuboni i-PayPal njengenketho? Ke kwinqwelo ekunene kukho imenyu ehlayo yamazwe, tshintshela ilizwe eUnited States kwaye ukhetho lwePayPal luya kubakho ukukhetha nokusebenzisa.
Ndiwubuza njani umbuzo malunga nevenkile kunye nentengiso?
impendulo: Nxibelelana nathi ngokufumana eli khonkco.
Kutheni ufuna igama lam, i-imeyile, njl njl?
1. Ukuqinisekisa kunye nokuhlawulisa ikhadi lakho letyala xa usebenzisa i-PayPal okanye i-Stripe.
2. Ukuvelisa isitshixo selayisensi yesoftware kuwe esekwe kwi-imeyile yakho.
3. Okokugqibela, ukwenza iakhawunti ukuze ukwazi ukufumana kwakhona irisithi kunye nezitshixo zelayisensi osithengileyo kuthi ngaphambili ukuba uzakube uphulukene nazo kwixa elizayo.
Ngaba unayo ubungakanani okanye izaphulelo zemfundo?
impenduloUkuthengwa kobungakanani besaphulelo esongezelelweyo. Yandisa inani leekopi zesipho, ishishini elincinci, isikolo okanye iqumrhu ukuze ufumane ixabiso elincitshisiweyo. Ivenkile yePlum emangalisayo ngokuzenzekelayo ithatha ubungakanani kwiakhawunti kwaye ibonise isixa sesaphulelo. Izaphulelo ziboniswe ngezantsi:
Iikopi ezi-2 + zepesenti ezili-10
I-5+ ye-20% isuswe
I-10+ ye-30% isuswe
I-50+ ye-40% isuswe
I-100+ ye-50% isuswe
Ukuba ndingumnini wangaphambili kwaye ndinedilesi entsha ye-imeyile ndithenga njani?
Impendulo: Ulibale iakhawunti yakho yakudala kwaye usebenzise i-imeyile yakho ukwenza iakhawunti entsha. Asinakuhlaziya endala ngenxa yokhuseleko.
Ukuba ndizama ukuthenga nokufumana umyalezo 'i-imeyile sele ikhona' ndithini?
Impendulo: Yiya kwinto yeAkhawunti kwimenyu ephezulu ephepheni. Okanye ucofe apha. Emva koko ungene xa uyazi iphasiwedi yakho. Ukuba awuyazi iphasiwedi, cofa kwindawo ethi 'Ulahlekelwe ligama eliyimfihlo' ukuze lithunyelwe nge-imeyile.
Kutheni ufuna igama lam kunye ne-imeyile?
Impendulo: Sizisebenzisa ukwenza iphepha-mvume kunye nokuthumela i-imeyile kuwe. Wonke umntu ufumana ezakhe izitshixo zelo layisenisi zolu setyenziso.
Sigcina igama lakho, i-imeyile kunye nento oyithengileyo. Emva kwexesha xa ungaze uyidinge loo lwazi kwakhona (ngenxa yekhompyuter entsha, ukusilela kwidrive, ubusela, njl.njl.) Emva koko unokufumana irisithi kunye nezitshixo zelayisensi. Ngalo lwazi ungafumana ii-apps zethu kwaye zibaleke kwangoko.
Inkampani yakho iyisebenzisa njani inkcukacha zam kunye nemfihlo?
Impendulo: Asisoze sathengisa okanye sikhuphe nayiphi na imininingwane yobuqu. Asikaboni nokubona ukuthengiswa kwemali okanye amakhadi etyala. Lonke olo lwazi luphakathi kwakho, isikhangeli sakho kunye nePayPal okanye iiStripes server. Akukho ndlela sinokugcina ngayo olo lwazi nokuba sifuna.
Ukuba ukhetha ukufumana incwadana yethu yeendaba unokufumana enye rhoqo kwiminyaka embalwa. Incwadana yokugqibela yabuya ngo-2012. Sihlala sibhalela kuphela xa sinethuba kunye neendaba ezibalulekileyo.
iTunes App Store Q&A
Ndifumana njani iodolo kwi-iPad yam ngaphezulu ukuyisebenzisa kwi-iPhone yam?
impendulo: Okulula, sebenzisa iakhawunti enye oyithengileyo kwi-iTunes kwaye uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde ufake isoftware kwi-iPhone. I-Apple ayikuhlawulisi ukuba uphinde uphinde ulayishe into esele yakho. Zonke iinkqubo zethu zokusebenza zikwindawo yonke ezithetha ukuba zisebenza kwi-iPhone kunye ne-iPad. Ii -apps ezithengiweyo ngomsebenzi we-Android kwiifowuni ezahlukeneyo ze-Android kunye neetafile.
Ukuba ndiyicimile iapp okanye ndifumene ifowuni entsha, ndingaphinde ndiyifumane njani i-app?
Impendulo: Phinda uyikhuphele phantsi usebenzisa i-ID okanye i-imeyile oyithengileyo kuyo. Cofa kwikhonkco ukuze ufunde indlela yokuphinda ukhuphele i-app oyithengileyo kuyo Ivenkile yeApple iTunes okanye kwi I Google Play Store. Ukuba uyazibuza ukuba uyithengile na iapps unokujonga iirisithi zakho kwiVenkile yeApple yeApple okanye kuGoogle Play.
Ndithenge iapp yakho. Ndiyifumana njani irisithi, ndikhangela intlawulo, ndibuze umbuzo wentengiso?
Impendulo: Nxibelelana neVenkile yeApple yeApple okanye iGoogle Play, naphi na apho uthengile khona. Asinakukunceda ngokuthengisa kodwa singakunceda ngenkxaso yetekhnoloji yeapps zethu.
Ukuba nditshintshile nje ukusuka kwi-Android ukuya kwi-iPhone okanye i-iPhone ukuya ku-Android kwenzeka njani ukuba ndiyitshintshe?
Impendulo: I-Apple kunye neGoogle zilawula konke ukuthengisa kwaye aziboneleli ngandlela zokwenza oko.
I-Q & A. yeVenkile yeGoogle Play App
Ndifumana njani i-oda kwithebhulethi yam ye-Android ngaphezulu ukuze ndiyisebenzise kwifowuni yam ye-Android?
impendulo: Okulula, sebenzisa iakhawunti enye oyithengileyo kuGoogle Play kwaye uphinde uphinde uphinde ukhuphele isoftware kwifowuni yakho. UGoogle akakuhlawulisi ukuba uphinde ugcwalise into esele yakho.
Thepha apha ukuthumela i-imeyile.